Fikradaha sariiraha ku qarsada saqafka, derbiga ama qaanadaha dhexdooda | Qurxin
Susana godoy | | Qolalka qolalka, Dharbaaxo
A guri yar, waxay dhib ku noqon kartaa dad badan. Waxaan had iyo jeer ku riyoonaa meelo waaweyn iyo qurxin waasac ah isla waqtigaas oo casri ah oo gees walba dhinac walba leh alaab guri. Hagaag, markaan isku aragno aqal yar, maahan inaan ka tanaasulno riyadeena.
Waxaan kaliya u baahanahay inaan u adeegsanno guryahaas asalka ah ee asalka ah, kuwaas oo na siiya nolol tayo fiican leh. The sariiraha ku dhuunta xalka ugu fiican ee qol loo abuuro qaybta aad doorbidayso ee guriga. Maalintii way sii qarsoonaan doonaan waxayna soo bixi doonaan habeenkii, si ay u helaan nasasho fiican.
1 Sariiraha ku qarsoon saqafka
2 Sariiraha derbiga ku gabbanaya
3 Ikea ma leedahay sariiro dhuumanaya?
4 Halkee la dhigaa sariiro qarsoon?
5 Qaar ka mid ah moodooyinka sariiraha ee dhuumanaya
Sariiraha ku qarsoon saqafka
Haddii aad haddaba ka fekereyso fikradda laakiin aadan aqoon meel aad dhigto, maxaad u maleyneysaa saqafka? Haa, priori waxay noqon kartaa fikrad xoogaa yaab leh, laakiin waad jeclaan doontaa isla marka aad aragto. The sariiraha isku laalaada saqafka waxay u oggolaan doonaan booska qolalkayaga inaysan ka baqin alaab dambe. Sariirta noocan ah waxaa lagu dhejin doonaa qaybta sare ee qol kasta. Si ay u awoodaan inay adeegsadaan, waxay leeyihiin nidaam fiilooyin bir ah, iyo sidoo kale tilmaamo sahli kara in la hawl galo oo sahlanaato.
Mid kale oo ka mid ah faa'iidooyinka sariiraha ku qarsoon saqafka, waa marka aad hoos u dhigto, dhulka ma gaarayaan. Sidaa awgeed, haddii aad leedahay miis kuraas leh oo ah qolka cuntada maalintii, ama miis shaqo, waad kaga tagi kartaa meesha. Miyaanay u muuqan ikhtiyaar ikhtiraac ah?
Sariiraha derbiga ku gabbanaya
Sariir Laabid Horizontal ...
Alaabta guryaha lagu beddeli karo ayaa noqonaya kuwo mooddo badan leh. Haddii ka hor intaanan arag sida sariir looga soo dejin karo saqafka, hadda waxaan la harnay qayb kale oo aasaasi ah. Waxaan ka hadlaynaa sariiraha derbiga ku qarsoon. Sababtoo ah habkan, waxaan sii wadi doonnaa inaan ixtiraamno booska, halka aan dhowr fursadood siin doonno isla meheraddaas.
Markaan ka hadlayno a sariirta isku laabanaysa gidaarka, Furiish aad u fara badan ayaa maskaxdaada ku soo dhacaya oo aan ka saari karnaa aaga nasashada. Taasi waa sida ay tahay !. Waan arki karnaa sida qolka labiska ama looxyada ay ku jiri karaan guddi hoos u dhac ah oo u horseedi doona sariirta lafteeda. Nidaamka loogu yeero Haydarooliga ayaa noqon doona midka mas'uulka ka ah awood u yeelashada hoos u dhigida iyo kor u qaadida qalabka sida ay doonaan. Maanta, waxaan sidoo kale arki karnaa sida qalabka guryaha ee caadiga ah loogu beddeli karo sariir. Xaaladaha badankood, waxay noqon doonaan gabi ahaanba lama oga. Cunsurka layaabka leh ayaa lagu dhejin doonaa wejiyada martidaada markay arkaan inaad qolka fadhiga u beddelayso qol raaxo leh!
Ikea ma leedahay sariiro dhuumanaya?
Markaan ka fikirno iibso alaab guri oo jaban, Ikea waa dukaanka had iyo jeer maskaxda ku soo dhaca. Sidaa darteed, waa in la yiraahdaa haddii aad raadineyso sariiro qarsoon, waxaad sidoo kale ka heli doontaa dukaanka kuugu dhow. Waxay leeyihiin qaab fudud, laakiin sidoo kale wax ku ool ah. Waxaad ku raaxeysan kartaa labis qurux badan oo cad, kaas oo sariir 90 × 200 ka soo bixi doonta. Dabcan, waa ikhtiyaar aasaasi ah laakiin isla markaa kaamil ah si sariirta laga hadlayo aysan u daganeyn dabaq ama guri yar.
Halkee la dhigaa sariiro qarsoon?
Sidaan aragnayba, waxaa jira dhowr meelood oo la dhigo sariirta qarsoon.
Salón: Markaan guri yar leenahay, waa inaan ka fikirno halka aan dhigeyno sariiraha qarsoon. Mid ka mid ah meelaha ugu fiican waa qolka fadhiga. Marka hore, maxaa yeelay inkastoo sariiraha fadhiga Waxay na siinayaan ikhtiyaarka nasashada, maxaa ka fiican marka la doorto qayb ka mid ah alaabta guriga oo u shaqeysa sida oo kale laakiin had iyo jeer qarsoon. Sidaa awgeed, qalabka TV-gu waa mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn. Sidoo kale, sabuurada waaweyn ayaa sidoo kale qarin kara wax kale.
Qolalka dhalinyarada: Haddii aan horeyba ugu baahanahay boos qol, ee ku yaal dhalinyaro ama caruur, labalaabka. Taasi waa sababta ay u habboon tahay in la rakibo qayb ka mid ah alaabta guriga noocan oo kale ah iyo in ay qabato shaqadeeda laba-laabka ah.
Daraasado: Maalintii adiga ayey noqon kartaa goobta shaqada ama waxbarashada. Sidan ayaa kugu hareerayn doonta buugaag waaweyn ama alaab guri si aad u abaabusho dhammaan buugaagta ama waraaqaha. Laakiin habeenkii, waxay lahaan doonaan shaqadooda sariir isku laaban.
Shaki la'aan, sariiraha qarsoon ama sariiraha isku laaban ayaa ah mid ka mid ah xulashooyinka ugu fiican, labadaba wax ku ool ah iyo kuwo asal ah. Sidan oo kale uma baahnaan doonno inaan aragno gurigeenna oo ay ka buuxaan alaab guri. Miyaad hore go aan uga gaadhay mid?
Qaar ka mid ah moodooyinka sariiraha ee dhuumanaya
Guryaha yaryar, dhig a sariirta adigoon qaadan boos aad u badan waa dhib badan tahay. Si looga fogaado dhibaatadan, guryaha guryaha kala duwan ayaa u shaqeeyay nashqadeeyayaashooda si ay xal u helaan.
Astaanta Daraasado, wuxuu u sameeyay sariiro kaamil ah meelaha yar yar, maalintii iyo marka aan la adeegsan waxaa lagu kiciyaa iyadoo la adeegsanayo qaab aad u raaxo badan waxaana lagu xareeyaa saqafka, taas oo ka dhigeysa meeshaas mid furan iyadoo sariirta aysan caqabad ku noqon. Waxaa lagu dhejin karaa dherer kala duwan iyadoo kuxiran baahiyaha iyo marka hoos loo dhigo, lugaha qaar ayaa lagaa saaraa si xasilloonidiisu u weynaato. Waxa kale oo ay leedahay faa iidada ah in marka "lagu keydiyo" saqafka ay noqoto il iftiin aad u faa'iido badan iyada oo ay ugu wacan tahay rakibidda dhibco kala duwan oo sariirta hoosteeda ah.
Waxa kale oo jira habab kale oo ka raqiisan, laakiin ka yar hal-abuurnimada, tusaale moodeelka Kombiyuutarka Murphy Euro astaanta Bed Sariiraha Murphy ee casriga ah wuxuu ka dhigayaa sariirta inay baaba'do mar aan soo kacno subaxa hore oo aan uga tagno meeshiisa miis waxtar leh oo raaxo leh oo leh shelf. Qofna ma awoodi doono inuu ogaado in gadaasha sariir ballaaran ay tahay haddii aadan adigu u sheegin. Waxay leedahay moodooyin kala duwan oo ku xiran cabbirka sariirta iyo adeegga.
Naqshad kale oo astaan ​​ah Sariiraha Murphy ee casriga ah Waxay ka kooban tahay kursi gacmeed oo raaxo leh marka sariirta la dhigo si aad ugu raaxeysatid booska inta ugu badan maalinta. Ayaa qiyaasa in taasi sariir tahay habeenkii?
Had iyo jeer waan tagi karnaa sariiraha laabma ka classic badan marka la dhigo waxay u egyihiin labis fudud. Waxaan ka heli karnaa xitaa xulashada sariiraha sariirta ama sariiraha hal ama laba jibaar ah.
sawirro: leblogdeco, gogosha sagxadda, decoraciondelacasa, camag.es, costco.co, tocamadera.es
Wadada buuxda ee maqaalka: Inicio » Meelaha » Qolalka qolalka » Sariiro qarsoon
Waxaan xiiseynayaa sariirta isku laaban 1 Waxaan doonayay inaan ogaado qiimaha dijo
sidoo kale qiimaha sofabed 2
Reply to Waxaan xiiseynayaa sariirta isku laaban 1 Waxaan doonayay inaan ogaado qiimaha
Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado sariirta laba kursi iyo in marka la xidho fadhiga fadhiga uu sii joogo
Xagee ka heli karaa sariirahan isku laablaabmaya ee 90 ° ah oo umuuqda armaajo ???? Waa maxay qiimaheeda oo ay ka jirtaa 1,5 meelood
Xagee ka iibsan karaa sariirta saqafka koreysa imisana waa qiimaheeda? Jawaabtu waa deg deg. Mahadsanid.
Jawaab MIlagros Moreno Perez
Sariirtu waxay ka timid BedUp oo qiimaheeda si kaladuwan ayuu u kala duwan yahay iyadoo loo eegayo cabirrada, dhammaadka iyo qalabka. Waxaad weydiisan kartaa sicir bararka at http://www.bedup.fr/
Waad salaaman tahay, habeen wanaagsan, haddii aad naxariis badan tahay ii sheeg qiimaha sariirta sariirta ah oo u eg armaajo iyo inaad ogaato haddii uu jiro nooc ay ku jiraan laba kali keli oo ay u kaydsan yihiin qol gaar ah. gabdhahayga oo boosku wuu yaryahay waxaana loo raraa Cuernavaca Morelos
Qiimaha sariiraha jiifka ah ee la beddeli karo waa ku dhowaad 2800 XNUMX
Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado qiimaha sariirta ugu dambeysa ee laba-laab ah, taas oo ah dharka dharka fudud ee fudud. Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado cabirrada, haddii ay ku jirto furaashka, haddii midabbo badan leeyihiin, iyo qiimaha.
Ku jawaab Marta López
Sellex ama Elmenut waxaad ka heli kartaa sariiro isku laabma oo noocaan ah. Sariirtaas si khaas ah kuma sheegi karo cidda saxeexaysa tan iyo markii gelitaanka uu qoray saaxiibkay
Waad salaaman tahay, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado qiimaha sariirta laba laablaabma ee midabka cad, fadlan.
Waxaan xiiseynayaa sariirta noqota kursi gacmeed: «Sariiraha Murphy ee casriga ah», waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado qiimaha lacagta iyo kaarka deynta.
Habeen wanaagsan, waxaan xiiseynayay inaan helo sariir qarsoon, sideen ku heli karaa macluumaad dheeri ah, cabir, midab, qiimo? Mahadsanid
Ku jawaab maria de fatima nogueira ramos
Waan jeclaa inaan ogaado qiimaha sariirta laba-laaban ee dhinacyada isku laaban leh fadhiga iyo shelf. Mahadsanid
Ku jawaab prisca
Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado tilmaamaha ku yaal Madrid, halkaas oo aan ku arki karo alaab noocan oo kale ah mahadsanid
Jawaab Chus VD
Meeqo sariirta la keydsaday waana miis Mahadsanid
Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado qiimayaasha iyo halka aan aado si aan uga helo
Ku jawaab Macarena Gallardo
Waad salaaman tahay, waxaan raadinayaa miisaaniyad sariirta ilaa saqafka sare, waxaan ku noolahay Madrid.
Ku jawaab Litzan
Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado qiimaha iyo halka aan ku arki karo sariiraha ku qarsoon saqafka
Xagee ka helaa, waxaan joogaa Bogota, Colombia
Jawaab Sandra Abella
Waxaan u baahanahay sariir isku laaban laba derbi
sida alaabta guriga
Waxaan ku noolahay Arjantiin, waxaan jeclaan lahaa inaan iibsado sariir kor u kacda saqafka. Waxaan ubaahanahay uguyaraan farsamada iyo sifiican dhamaan csma. Jawaabtaada waan sugayaa aad baad u mahadsantahay
YESMIN CECILIA GARCIA CORREA dijo
FADLAN SOO QOR SARIIR
Jawaab ku bixi YESMIN CECILIA GARCÍA CORREA
Ciise Castillo Lara dijo
Fadlan miyaad i dhaafaysaa ama isiin kartaa qiimaha sariirta la dhoofin karo ee darbiga. Waxaan ku noolaa Saltillo Coahuila Mexico waxaanan xiiseynayaa sariiraha nuucaan ah ee derbiga ku yaal si aan boos u badbaadiyo. XAQIIQO
Jawaab Jesús Castillo Lara
Waxaan jeclahay sariirta sariirta guryaha laga guuro ee aan ka helo ECUADOR
SALAAMO WANAAGSAN Waxaan Raadinayaa Sariir ku dhuumanaya Sariirta halka aan ka heli karo Waxaan ka imid VALENCIA
Jawaab HECTOR MACKINTOSH
Waa salaaman tahay, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado sariirta sariirteeda laga soo rido saqafka, iyo midka ka soo baxa gadaashiisa fadhiga cas, mahadsanid
Ku jawaab Alazne
Waxaan u baahanahay sariirta derbiga isku qarinaysa oo isu beddelaysa miiska kombuyuutarka
Cajiib !!! Waxaan ahay naqshadeeye Sideen kula soo xiriiri karaa ???
Ku jawaab Irchka
Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado halka ay ku yaalliin iyo qiimaha sariirta laba laab laabaysa ee derbiga
SUPER Model, FANTASTIC WAAN UGU xiiso qabaa sariiro qarsoodi ah oo meheradaha ay ku yaalliin, waxaan joogaa VERACRUZ, MEXICO, WAAN KU JECLAHAY
Ku jawaab RUBEN ANTONIO AGUILAR VILLA
Isbaanishka, waxaa jira shirkad ku takhasustay xalalka kala duwan ee sariiraha kor u kaca saqafka. Waxaa loo yaqaan Tu Lecho al Techo waxayna ku taalaa Madrid.
Midabada u dhiganta cagaarka
Ku qurxi guriga sabuurado sawir leh